ဂြူဗငျတပျဈအသငျးရဲ့ကွယျပှငျ့တဈဦးကို ခြိတျဆကျနသေညျ့ ယူနိုကျတကျ။ – SoShwe
Home/Sport/ဂြူဗငျတပျဈအသငျးရဲ့ကွယျပှငျ့တဈဦးကို ခြိတျဆကျနသေညျ့ ယူနိုကျတကျ။
ဂြူဗငျတပျဈအသငျးရဲ့ကွယျပှငျ့တဈဦးကို ခြိတျဆကျနသေညျ့ ယူနိုကျတကျ။
So Shwe February 15, 2021	Sport Leaveacomment
ယူနိုကျတကျအသငျးသညျ ဂြူဗငျတပျဈအသငျးရဲ့ကှငျးလယျကွယျပှငျ့ကစားသမားတဈဦးဖွဈသညျ့ ရာဘီယူရဲ့ အေးဂငျြ့နဲ့ခြိတျဆကျလကျြရှိကွောငျး အီတလီအခွစေိုကျသတငျးဌာနက ဖျောပွခဲ့ပါတယျ။ ယူနိုကျတကျအသငျးသညျ အဆိုပါပွငျသဈလူမြိုးကှငျးလယျကစားသမားကို PSG အသငျးမှာရှိစဉျတညျးက စောငျ့ကွညျ့ခဲ့ပွီး ကစားသမားမှာမူ ပွီးခဲ့သညျ့နှဈအတှငျးက ဂြူဗငျတပျဈအသငျးကို အလှတျပွောငျးရှကွေ့ေးနဲ့ ပွောငျးရှသှေ့ားခဲ့ခွငျးဖွဈပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ ရာဘီယူအနဖွေငျ့ ဂြူဗငျတပျဈအသငျးအတှကျ (၇) ပှဲသာ ပှဲထှကျကစားခှငျ့ရရှိထားပွီး ပုံမှနျပှဲထှကျခှငျ့အတှကျ ရုနျးကနျနရေခွငျးကွောငျ့ ဂြူဗငျတပျဈအသငျးကို ပွနျလညျစှနျ့ခှာရနျ စီစဉျနပေါတယျ။ အီတလီသတငျးစာတဈစောငျရဲ့အဆိုအရ အဆိုပါပွငျသဈလူမြိုးကှငျးလယျကစားသမားသညျ ဂြူဗငျတပျဈနညျးပွ ပီယာလိုရဲ့ အလှညျ့ကလြူထုတျပုံအပျေါ စိတျပကျြနပွေီး သူ့ရဲ့အေးဂငျြ့ဖွဈသူကို အသငျးသဈရှာဖှခေိုငျးထားကွောငျး သိရှိရပါတယျ။
ယူနိုကျတကျအသငျးသညျ လာမယျ့နှရောသီ၌ အသငျးရဲ့ကှငျးလယျကစားသမားပေါ့ဘာကို ရောငျးခရြနျသတငျးမြားထှကျပျေါနပွေီး ဂြူဗငျတပျဈအသငျးကလညျး ပေါ့ဘာအတှကျ ပွောငျးရှကွေ့ေးတဈစိတျတဈပိုငျးအဖွဈ အသငျးက ကစားသမားတဈဦးဦးကို အလိုကျပေး ကမျးလှမျးဖှယျရှိနပေါတယျ။ ဂြူဗငျတပျဈအသငျး အလိုကျပေးကမျးလှမျးနိုငျခွရှေိသညျ့ ကစားသမားစာရငျးထဲ၌ ရာဘီယူလညျးပါဝငျနပွေီး အခွားသောကစားသမားမြားဖွဈသညျ့ ဒေါကျဂလပျဈကျောစတာနဲ့ အဲလကျဈဆနျဒရိုတို့လညျး ပါဝငျနပေါတယျ။
ကစားသမားရဲ့လစာငှပေမာဏက ယူနိုကျတကျအသငျးနဲ့ရာဘီယူတို့အကွားအပွောငျးအရှကေို့ အဟနျ့အတားဖွဈစနေိုငျပမေယျ့ ယူနိုကျတကျအသငျးကမူ ပေါ့ဘာကို မရောငျးခဖြွဈခဲ့သညျ့တိုငျ ရာဘီယူကို ချေါယူနိုငျမညျဟု ယုံကွညျနပေါတယျ။ ဒါ့အပွငျရာဘီယူအနဖွေငျ့ အခွားသော ပရီးမီးယားလိဂျအသငျးတဈသငျးဖွဈသညျ့ အဲဗာတနျအသငျးကို ပွောငျးရှနေို့ငျဖှယျရှိကွောငျး သတငျးမြားထှကျပျေါလကျြရှိပါတယျ။
ယူနိုက်တက်အသင်းသည် ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းရဲ့ကွင်းလယ်ကြယ်ပွင့်ကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်သည့် ရာဘီယူရဲ့ အေးဂျင့်နဲ့ချိတ်ဆက်လျက်ရှိကြောင်း အီတလီအခြေစိုက်သတင်းဌာနက ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ ယူနိုက်တက်အသင်းသည် အဆိုပါပြင်သစ်လူမျိုးကွင်းလယ်ကစားသမားကို PSG အသင်းမှာရှိစဉ်တည်းက စောင့်ကြည့်ခဲ့ပြီး ကစားသမားမှာမူ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်အတွင်းက ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းကို အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ကြေးနဲ့ ပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ရာဘီယူအနေဖြင့် ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းအတွက် (၇) ပွဲသာ ပွဲထွက်ကစားခွင့်ရရှိထားပြီး ပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်အတွက် ရုန်းကန်နေရခြင်းကြောင့် ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းကို ပြန်လည်စွန့်ခွာရန် စီစဉ်နေပါတယ်။ အီတလီသတင်းစာတစ်စောင်ရဲ့အဆိုအရ အဆိုပါပြင်သစ်လူမျိုးကွင်းလယ်ကစားသမားသည် ဂျူဗင်တပ်စ်နည်းပြ ပီယာလိုရဲ့ အလှည့်ကျလူထုတ်ပုံအပေါ် စိတ်ပျက်နေပြီး သူ့ရဲ့အေးဂျင့်ဖြစ်သူကို အသင်းသစ်ရှာဖွေခိုင်းထားကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
ယူနိုက်တက်အသင်းသည် လာမယ့်နွေရာသီ၌ အသင်းရဲ့ကွင်းလယ်ကစားသမားပေါ့ဘာကို ရောင်းချရန်သတင်းများထွက်ပေါ်နေပြီး ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းကလည်း ပေါ့ဘာအတွက် ပြောင်းရွှေ့ကြေးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် အသင်းက ကစားသမားတစ်ဦးဦးကို အလိုက်ပေး ကမ်းလှမ်းဖွယ်ရှိနေပါတယ်။ ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်း အလိုက်ပေးကမ်းလှမ်းနိုင်ခြေရှိသည့် ကစားသမားစာရင်းထဲ၌ ရာဘီယူလည်းပါဝင်နေပြီး အခြားသောကစားသမားများဖြစ်သည့် ဒေါက်ဂလပ်စ်ကော်စတာနဲ့ အဲလက်စ်ဆန်ဒရိုတို့လည်း ပါဝင်နေပါတယ်။
ကစားသမားရဲ့လစာငွေပမာဏက ယူနိုက်တက်အသင်းနဲ့ရာဘီယူတို့အကြားအပြောင်းအရွှေ့ကို အဟန့်အတားဖြစ်စေနိုင်ပေမယ့် ယူနိုက်တက်အသင်းကမူ ပေါ့ဘာကို မရောင်းချဖြစ်ခဲ့သည့်တိုင် ရာဘီယူကို ခေါ်ယူနိုင်မည်ဟု ယုံကြည်နေပါတယ်။ ဒါ့အပြင်ရာဘီယူအနေဖြင့် အခြားသော ပရီးမီးယားလိဂ်အသင်းတစ်သင်းဖြစ်သည့် အဲဗာတန်အသင်းကို ပြောင်းရွှေ့နိုင်ဖွယ်ရှိကြောင်း သတင်းများထွက်ပေါ်လျက်ရှိပါတယ်။
Previous စာသငျကြောငျး / ကတ်ကသိုလျကြောငျးတှေ ပွနျလညျဖှငျ့လှဈသငျ့ပွီလား ? ? ?
Next ၂၀၂၃ ခုနှဈမှာ မွနျမာပွညျကိုရောကျရှိလာမယျ့ ဂပြနျနိုငျငံအခွစေိုကျ စြေးဝယျစငျတာကွီး။